Ciyaaryahan hore ee kooxda Barcelona oo daboolka ka qaaday sirta ka dambeysa halyaynimada Lionel Messi – Gool FM
RASMI: Liiska xiddigaha Kooxda Barcelona ay habeen dambe kala hortagayso Espanyol oo la shaaciyey… (MSG oo hoggaaminaya & Firpo oo maqan)
RASMI: Dybala & De Ligt oo ka maqan liiska xiddigaha Kooxda Juventus ay caawa kala hortagayso AC Milan
RASMI: Liiska xiddigaha Kooxda AC Milan ay caawa kala hortagayso Juventus oo la shaaciyey…(Castillejo oo maqan & Zlatan oo ku jira)
Tammy Abraham oo Mushahar kordhin ka dalbaday Kooxdiisa Chelsea… (Imise kun ayuu doonayaa in jeebka loo geliyo?)
Ciyaaryahan hore ee kooxda Barcelona oo daboolka ka qaaday sirta ka dambeysa halyaynimada Lionel Messi
Dajiye November 27, 2018
(Barcelona) 27 Nof 2018. Halyayga kooxda Barcelona Hristo Stoichkov ayaa wuxuu xaqiijiyay in Lionel Messi uu calaamad u yahay taariikhda kubada cagta, isagoo tilmaamay in sababta ka dambeysa ay tahay inuu yahay shaqsi aad u wanaagsan.
Wargeyska “Sport” gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysigan uu bixiyay laacibkan kusoo guuleesatay abaal marinta Golden Ball sanadkii 1994-tii.
“Waan garanayaa Messi tan iyo caruurnimadiisa uu qeybta ka ahaa Academy-yada La Masia, wuxuu ahaa 12 jir, shaqsiyaad yar ayaa ka war qaba in kubada cagta uu qeyb ka yahay ciyaaryahan cajiib ah sida isaga oo kale”.
“Waa halyay, mana aqbalayo in cidi ay shaki galiso xidiga ugu fiican taariikhda kubada cagta aduunka”.
Waxaa xusid mudan in Hristo Stoichkov uu soo xirnaa maaliyada kooxda Barcelona inta u dhexeesay 1990 ilaa iyo 1995, wuxuuna kula guuleestay koobab fara badan, isagoo kasoo muuqday 151 kulan, wuxuuna dhaliyay sidoo kale 76 gool.
Kooxda Liverpool oo heleysa dhiiragalin xoogan ee ku aadan Sadio Mané kahor kulanka PSG
Shaxda rasmiga ah kulanka Roma Vs Real Madrid